Hiriira Nagga Haawwasa Oromoo Belgium fi Nederlands
Guyya Haraa Caamsa 9 bara 2014 Mootumman garbonfatan wayyane Baratoota Oromoo fi uumataa Oromoo irrati balessa lubu irran gesisa jiru fi mirga Oromoo molqun lafa Oromoo Godiina adda Oromiya muree fudhachuuf yaalii ini goocha jiru balalefachuun hiriira nagaa Haawassi Oromo biyya Belgium fi Nederlands Den Haag irrati mormi dhageesisa olan. Yeero jalaqabif hiriira Oromoo heedun irrati argaman kana milkin xumratan jiru. Oromoon tokkumaan hanga dhummati akka qabsa’aan murtefatan jiru. Oromoon hiriira bayee kun wajjiralee Mootumma Nederlands Ministera Dhimmaala, Paarlamaa, Embassy USA deemun mormii fi balalefana mootumaa Ethiopia irrati qaban ibsatan jiru. Goocha yaakka Mootumman abban hiree raawwacha jiru kana saxilun bareefama qoophayee wajjiralee kanati iyyata isaan galchatan jiru.
Baratoon fi Uummani Oromoo Qabsoo egalee hanga Bilisuumaa Oromoon xumuramuuti degersa walii irra hin cinnee barartoota Oromoof goochuuf wada galuun, gara fula duratis Hiriira nagga walfaktuu Europa Paarlamaa irrati gegesuuf murtefaachun dirqama barbachisuu hundaaf qoophi ta'uu isaan ibsan jiru. Magallaa Den Haag gutuu keessa yeeroo hiriira goocha turan kana Mootuuman Nederlands Polisoota heedu fi Konkolata heedu ramaduun guyya gutuu tajajila barbachisuu goochaaf ture. Waan nama dhibu Ijoole Oromoo hiriira ba’aan biyya isaan keessati Polisiin rasasn yeero reebu Polisoon Nedelands amoo Oromoo Hiriira Nagga bayee Sagalee dudiftu Polisi isaa gudda Oromoof keenun hirira nagga kana deegra oluun isaa Oromoo hunda Ajaibe jira.
Baratooni Oromoo qabsoo goochun lubu isaan itti wareegan kun bakka ga'uu qaba. Mootumman Gaafi Oromoo seera deebisuu dhisee lubu ijoole Oromoo baleese seeran gafatamuu qaba. Maaster Plaanin Oromoo buqisuu kun yoomi ilee hojii irra hin oluu utuu Oromoo lubun jiru. Mootumman wayyanee seera fi heeri ini wayee Oromoo irrati murteese hundi seeran ala waan ta'eef yomi ilee tanan ni digama. Ethiopian siiran federlaawa soba odeesituu dhugaa waan hin taneef Oromoo gaafi hiree of ofiin murteefachuu itti fufu qaba. Heera federlalism kan digee Mootumma wayyanee waan ta'eef Oromoo gaafii abba biyuuma isaa jabeese iti fufu akka qabuu hiriira kana irrati balinan ibsamee jira
Dhummaa irrati Oromoo Baratoota fi uumataa Oromoo qabsoo irra jiru kana malaaqa kan waltii qabeef yamuu ta’uu gara fulula duratisi degeresa waan hundan gumachuuf wada seene jira.